मैले गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन अभिनेत्री प्रियंका कार्की( भिडियो सहित) - Onlines Time
मैले गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन अभिनेत्री प्रियंका कार्की( भिडियो सहित)
July 28, 2021 onlinestimeLeaveaComment on मैले गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन अभिनेत्री प्रियंका कार्की( भिडियो सहित)
अभिनेत्री प्रियंका कार्की गर्भवती छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय उनले आफ्ना फोटा र भिडिओ पोस्ट गरिरहेकी हुन्छिन्।
उनी आफूले गर्भावस्था ‘सेलेब्रेट’ गरिरहेको बताउँछिन्। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राखेका फोटाकै कारण प्रियंका र उनका श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ।
कतिपयले गर्भ रहेको पेट देखाएर ‘अंग प्रदर्शन’ गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। अरू धेरैले उनको समर्थन गर्दै शुभकामना दिएका छन्।
प्रियंका भने यी सबै कुराले आफूलाई प्रभाव नपार्ने बताउँछिन्।भन्छिन्, ‘आमा बन्नु एकदम खुसीको कुरा हो। म आफ्नो खुसी बाँड्न मन पराउँछु। म जस्तो छु, त्यस्तै देखाउन पनि चाहन्छु।
मैले त्यही खुसी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी हुँ। मलाई नराम्रो भन्नुमा मेरो केही दोष छैन। दोष देख्नेको मलाई वास्ता पनि छैन। राम्रो भन्नेहरू पनि धरै हुनु हुन्छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया देखेर मलाई अझ खुसी लाग्छ।’
विदेशतिर, अझ विशेषगरी कलाकार र सेलेब्रेटीहरूले गर्भावस्थाको फोटो-भिडिओ खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा राख्नु, गर्भावस्थाबारे कुराकानी गर्नु सामान्य मानिन्छ। हामीकहाँ भने गर्भावस्था अझै पनि छलफल र कुराकानीको विषय होइन भन्ने मान्यता छ।
प्रियंका भन्छिन्, ‘कति धेरै दिदीबहिनीहरूले मलाई गर्भावस्थाबारे सोध्नुहुन्छ। यसबारे जानकारी होस्, अनुभवहरू बाँडियोस् भनेर पनि म कुरा गरिरहेकी हुन्छ। म गर्भवती हुनुअघि जसरी फोटा राख्थेँ, अहिले त्यसरी नै राखिरहेकी छु।
पहिले तारिफ र प्रशंसा गर्नेहरूलाई अहिले किन आपत्ति? गर्भ रहेको पेट किन समस्या भएको हो?’प्रियंकाको गर्भावस्था अनुभव र सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया वरपर रहेर हामीले उनीसँग कुराकानी गरेका छौं।
Exclusive: विजय शाही ठ’ग हो भन्दै जंगिए ऋषि धमला ! मलाई पनि नराम्रो संग फसा’इयो भन्दै खोले सत्यतथ्य (भिडियो हेर्नुहोस)
जन्मेको ११ दिनमै आमा टाप ,दूध नभएर यी बच्चा रु’दै भोकभोकै (हेर्नुस् भिडियो )
टेलिभिजन प्रसारण हुन वैशाख लाग्ला तर गुनासाे सुन्ने र भेटघाट गर्ने काम सुरु भईसकेकाे छ – रवी लामिछाने
गृहजिल्ला पुगेर ओलीको झनै उत्तेजित भाषण: प्रच*ण्डको सा*त्तो खाए, एकएक गरि सबलाई थ*र्काए Pm Kp Oli.
वि’वादपछि पहिलोपटक अन्तरवार्तामा आएकी श्वेता खड्काले भनिन् -“मेरो एक मुठ्ठी सा`स रहुन्जेल मेरो सम्पुर्ण पसिना माझी वस्ती निम्ति बगाउनेछु”
February 18, 2021 February 18, 2021 onlinestime